I-CDC: Inkcazelo 'yogonywa ngokupheleleyo' inokufuna uhlaziyo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-USA ezaphulayo » I-CDC: Inkcazelo 'yogonywa ngokupheleleyo' inokufuna uhlaziyo
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Technology • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
UMlawuli wamaZiko aseMelika oLawulo lweNtsholongwane kunye noThintelo (CDC), uRochelle Walensky
UWalensky ukhuthaze bonke abantu baseMelika abafanelekileyo ukuba bafumane ii-booster shots, ngaphandle kokuchaphazeleka kwikamva labo kugonyo.
Abahlali base-US bathathelwa ingqalelo ukuba bagonywe ngokupheleleyo ukuba baneedosi ezimbini zokugonya iPfizer okanye iModerna, okanye ifoto enye efunekayo kwijab kaJohnson & Johnson.
Ukuba izixhasi zonyusa ziye zaba yinxalenye yemfuno yokuba zithathelwe ingqalelo 'ngokugonywa ngokupheleleyo', uninzi lwabo abafumene isibhamu sabo kwangethuba kuyakufuneka bafumane izikhuthazi.
Ukunyusa onke amayeza afumanekayo e-US afumene imvume kwi-CDC kunye noLawulo lokuTya kunye neDrug, kodwa kuphela kumaqela afanelekileyo.
Abantu baseMelika bathathelwa ingqalelo ukuba bagonywe ngokupheleleyo ukuba baneedosi ezimbini zePfizer okanye zeModerna zokugonya, okanye ifoto enye efunekayo kwijab kaJohnson & Johnson.
Oku kungatshintsha kungekudala.
Ngokuka-Mlawuli wase-US Centres for Disease Control and Prevention (CDC), URochelle Walensky, uthe iarhente inokuthi ihlengahlengise inkcazo yokuba "ugonywe ngokupheleleyo" ngokuchasene ne-COVID-19, evunyiweyo kwaye ifumaneka ukukhuthaza.
UWalensky wabuzwa kwinkomfa yabezindaba yanamhlanje, ukuba ngaba abo banelungelo lokufumana isikhuthazo kufuneka bafumane ezinye iidosi ukugcina imeko yabo yokugonya iphelele.
"Asikatshintshi inkcazo 'yokugonywa ngokupheleleyo,'” utshilo uWalensky, esongeza ukuba okwangoku ayingabo bonke abantu baseMelika abanelungelo lokudutyulwa.
"Kungafuneka sihlaziye inkcazo yethu 'yokugonya ngokupheleleyo' kwixa elizayo,” CDC watsho umlawuli.
Ukuba izikhuthazi zibe yinxalenye yemfuno yokuba zithathelwe ingqalelo 'ngokugonya ngokupheleleyo', uninzi lwabantu baseMelika abafumene isibhamu sabo kwangethuba kuyakufuneka bafumane izikhuthazi zokugcina imeko yabo 'yokugonya'.
Ukudubula kwenyusa lonke ugonyo olukhoyo e-US lufumene imvume kwi CDC kwaye ULawulo lokuTya iziyobisi (FDA), kodwa kuphela kumaqela afanelekileyo.
I-CDC ivumile iidosi zokukhuthaza bonke abantu abadala abafumene isitofu sokugonya sikaJohnson & Johnson, kunye nabantu abadala kunye nabantu abadala abangenakuchaphazeleka kwizitofu zokugonya zeModerna kunye nePfizer.
UWalensky kunye ne-CDC babhengeze kule veki abantu banokudibanisa kunye nokutshatisa i-booster shots ngokukhuselekileyo. Iarhente ikwabhengeze namhlanje ukuba ukufaneleka kokunyusa kuya kwanda kwiinyanga ezizayo.
UWalensky ukhuthaze nabani na ofanelekileyo ukuba afumane ii-booster shots, ngaphandle kwempembelelo yayo yexesha elizayo kwimeko yabo yokugonywa.
"Zonke zisebenza ngokufanelekileyo ekunciphiseni umngcipheko wesifo esibi, ukulaliswa esibhedlele, kunye nokufa, nangona kuphakathi kwe-Delta eyahlukileyo," kusho uMlawuli weCDC.
Ngokwedatha yakutshanje ye-CDC, ngaphezulu kwama-66% yabemi base-US bafumene idosi enye yeyeza lokugonya le-COVID-19.